एक घण्टा काठमाडौँलाई फन्को मारेको चिनियाँ जहाजले ‘ओभरसुट’ गरेपछि..! « Salleri Khabar
एक घण्टा काठमाडौँलाई फन्को मारेको चिनियाँ जहाजले ‘ओभरसुट’ गरेपछि..!
१४ भदाै, काठमाडौँ । चीनको छेन्दुबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको सिचुवान एयरको जहाजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा ओभर सुट गर्नुपरेको छ । यसक्रममा सो जहाजले एक घण्टा बढी आकाशमा फन्को लगाउनु परेको जनाइएको छ ।
मौसम खराबीले जहाजले ओभरसुट गर्नुपरेको विमानस्थलका एक उच्च अधिकारीले राससलाई जानकारी दिए । “जहाज सामान्य एप्रोचमा आएको हुन्छ, सामान्य मौसम खराबीले धावनमार्ग ‘रनवे’ मिस एप्रोच भए पनि नेक्स्ट एप्रोचका लागि ओभरसुट गर्नुपरेको हो”, उनले भने ।